जोशी हाइड्रोपावरको आईपीओ आजदेखि, कति भर्ने ? किन नभर्ने?  BikashNews
जोशी हाइड्रोपावरको आईपीओ आजदेखि, कति भर्ने ? किन नभर्ने?
२०७५ मंसिर १६ गते ८:३५ विकासन्युज
काठमाडौं । जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आइतबारदेखि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपीओ) अावेदन खुला भएको छ । हाइड्रोपावरले १६ करोड ९० लाख ४७ हजार बराबरका १६ लाख ९० हजार ४ सय ७० कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुला गर्न लागेको हो । उक्त आईपीओका छिटोमा बुधबार र ढिलोमा पुस १५ गते निष्कासन बन्द हुनेछ । उक्त शेयर आवेदकले न्यूनतम ५० कित्ता देखि अधिकतम ८ लाख कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
जोशी हाइड्रोपावरको अवस्था
जोशी हाइड्रोपावर क्रेडिट रेटिङ कम्पनी इक्रा नेपालले गरेको रेटिङमा ‘इक्रा रेटिङ आईपीओ ग्रेड ५’ प्राप्त कम्पनी हो । यो ग्रेडिङले कम्पनीको वित्तीय अवस्था औसतभन्दा पनि कमजोर रहेको देखाउँछ ।
इलाम जिल्लामा पूवा खोलामा ३ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको उक्त कम्पनीले यसअघि स्थानीयवासीका लागि निष्कासन गरेको शेयरमध्ये करिब ३३ प्रतिशत शेयरका लागि मात्र आवेदन परेको थियो । आवेदन नपरेका शेयर समेत सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ ।
आयोजनाले हालसम्म प्रति मेगावाट १८ करोड रुपैंया लागत अनुमान गरेको छ । यही लागतमा निर्माण सम्पन्न भए यो लागत औसत लागत बराबर नै हुनेछ । आईपीओ निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकममध्ये १२ करोड रुपैंया ऋण तिर्न र बाँकी अन्य दायित्वहरु भुक्तानी गर्न प्रयोग हुनेछ ।
निर्माणको चरणमा रहेको यो हाइड्रोपावर यो वर्षसम्म घाटामा रहे पनि आगामी वर्षदेखि नाफामा जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । नाफामा गए पछि आगामी २ वर्ष क्रमशः ५.१२ र ६.०४ रुपैंया प्रतिशेयर आम्दानीको प्रक्षेपण गरिएको छ ।
उक्त कम्पनीले लगानी फिर्ता गर्ने समय ११ वर्ष र त्यसको ब्याजदर अनुमान गरी डिस्काउन्टसहितको शेयर फिर्ता गर्ने समय ३० वर्ष छ । ३० वर्षपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बिक्ला सबै शेयर ?
तुलनात्मक रुपमा कम शेयर भए पनि कमजोर प्रतिफलका कारण उक्त कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताकाे अाकर्षण कम हुन सक्छ । यद्यपि २९ करोड रुपैंया हाराहारीमा लागत भएको आँखुखोला हाइड्रोपावरको शेयरमा समेत निष्कासनभन्दा बढी माग भएको अवस्थामा यो हाइड्रोपावरको सबै कित्ता शेयरका लागि अावेदन पर्न सक्छ ।
कति भर्ने ?
कुनै पनि कम्पनीको शेयरका लागि आवेदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय कम्पनीको प्रतिफलको अवस्था तथा बजारमा निष्कासन भएका अन्य कम्पनीको प्रतिफलको अवस्था विचार गरेर निर्णय गर्ने विषय हो । त्यसबाहेक लगानीकर्ताको लगानी विविधिकरणमा पनि यो निर्णय निर्भर हुन्छ । एकातिर इक्राको रेटिङले यो कम्पनी कमजोर रहेको देखाउँछ भने अर्काेतर्फ लगानी फिर्ता अवधि ३० वर्ष रहेको कम्पनीकाे विवरण पत्रमा उल्लेख छ । ३० वर्षपछि आयोजना सरकार मातहत जाने भएकोले पनि लगानीकर्ताको आकर्षण यसमा नहुन सक्छ । तर सेयर बजारमा केही वृद्धि भएकाे अवस्थामा अहिले लगानी गर्नेले राम्रा लाभ लिने सम्भावना हुन्छ ।
कम्पनी शेयरका लागि आवेदकले आवेदन गर्ने सबै वा अधिकांश शेयर पर्ने सम्भावना छ त्यसैले आवेदकले आफ्नो पोर्टफोलियो अनुसार आवेदन गर्न सक्नेछन् ।
सोमबार बन्दको आह्वान, सुरक्षा निकाय भन्छ-‘हल्लाको पछि नलाग्नू’
मंगलबार प्रदेश ३ को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुने
सेयर खरिदको भुक्तानी अब अनलाइन बाटै, दिनमा १० लाखसम्म भुक्तानी गर्न सकिने
विस्फोटमा परी तीनको मृत्यु, मृतक केसी विद्यार्थी नेता भएको अनुमान
असार १ गतेदेखि थप चार ब्रुमरले सडक सफा गर्ने, २ वटा चीन सरकारले दिने
सनराइज बैंकले एकैसाथ खोल्यो ४ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा, हेरौँ कहाँ कहाँ ?
भारतमा काे आउँदा नेपाललाई बढी फाइदा ? मोदीलाई पर्खिँदै चीन, पश्चिमाको रोजाईमा राहुल